သြစတြေးလျနိုင်ငံက COVID-19 မြင့်တက်မှုကို မတ်လတွင် ရင်ဆိုင်ရနိုင် - Xinhua News Agency
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ကင်ဘာရာမြို့၌ သူနာပြု Maddy Williams က Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် ထိုးနှံမှု ခံယူနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကင်ဘာရာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် မတ်လတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားမှုကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ဟု သြစတြေးလျ ထိပ်တန်းကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူက သတိပေးခဲ့သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊ ကူးစက်ရောဂါဌာနခွဲမှ အကြီးတန်းအတိုင်ပင်ခံ Dale Fisher က သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများသည် အခြားသော ကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံထားသော နိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများပေါ်မူတည်၍ လာမည့် ရှစ်လအတွက် “သတိ” ရှိသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လူဦးရေ၏ ၈၈ရာခိုင်နှုန်းခန့်အား ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးနှံထားသော်လည်း COVID-19 ကူးစက်မှုနှင့် သေဆုံးမှု စံချိန်တင်မြင့်တက်နေသည့် စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံအား ၎င်းက နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည်။
စင်ကာပူသည် ၎င်းနိုင်ငံမှ လူများအား စောစီးစွာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းကြောင့် ယခုအခါ ကာကွယ်နိုင်မှု အနေဖြင့် အရှိန်လျော့ကျလာကြောင်း၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် နွေရာသီတွင် ပိုမိုအေးမြသော ရာသီဥတုကို ပေးစွမ်းသဖြင့် မတ်လတွင် ရောဂါကူးစက်မှု အနေအထားတစ်ရပ်အား တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်း Fisher မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
“လူတွေက နွေရာသီမှာ အပျော်ခရီးတွေကို ထွက်ကြလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေက ပျော်ပွဲစားခရီးအတွက် အပြင်ထွက်ဖို့ တံခါးတွေ ဖွင့်နေကြပြီလေ” ဟု ၎င်းက သြစတြေးလျအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း (ABC) အား ပြောကြားခဲ့သည်။
“သြစတေးလျနိုင်ငံမှာ ဆောင်းရာသီကို ပြန်ရောက်တော့မှာဆိုတော့ မတ်လကနေ ဧပြီလလောက်အထိ ပိုစိုးရိမ်မိတယ်။ ဒါက တုပ်ကွေးရာသီလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ’’ ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“တကယ်လို့ ကာကွယ်ဆေးက အရှိန်လျော့ကျသွားတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီအချိန်က ပိုကူးစက်နိုင်တယ်။ လူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့တံခါးတွေနဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကို ပိတ်ကြလိမ့်မယ်’’ ဟု ၎င်းက
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်အထိ သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် အထက်၏ ၉၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးဖြစ်ပြီး ၈၂.၄ ရာခိုင်နှုန်မှာ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဩစတေးလျနိုင်ငံ၌ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဒေသတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အတည်ပြုလူနာသစ် ၁,၄၈၀ဦး ကျော်နှင့် သေဆုံးသူ ၄ ဦးတို့ ရှိပြီး စင်ကာပူတွင်မူ အတည်ပြုလူနာသစ် ၃,၀၉၉ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၁၄ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Australia facing COVID-19 surge in March: expert
CANBERRA, Nov. 13 (Xinhua) — A leading Australian infectious disease expert has warned that the country could faceacoronavirus resurgence in March.
Dale Fisher,asenior consultant in the Division of Infectious Diseases at Singapore’s National University Hospital, said Australians should be “cautious” for the next eight months based on experiences in other highly-vaccinated countries.
He compared Australia to Singapore where COVID-19 infections and deaths have surged to record highs despite approximately 88 percent of the population being fully vaccinated.
Fisher said that because Singapore began vaccinating its population early the country is now dealing with waning protection,asituation Australia could find itself in by March when summer gives way to cooler weather.
“I think you will getabit ofahoneymoon (in summer), because people open the doors, windows, go outside for picnics. he told the Australian Broadcasting Corporation (ABC).
“My concern, in Australia, would be more about March to April, as you’re going back into winter. It’s probably going to beagood flu season as well.
“If there’s any vaccine waning going on, that’ll be about the right time. People will be closing their windows and doors,” he said.
As of Friday 90.1 percent of Australians aged 16 and over had received one COVID-19 vaccine dose and 82.4 percent were fully inoculated.
Australia on Saturday reported more than 1,480 new locally-acquired coronavirus infections and four deaths compared with 3,099 new cases and 14 deaths in Singapore on Friday. Enditem